Indlu ekwiNdawo yoLondolozo lweNdalo iCostas del Cuniputu
Yiza uphile amava eyahlukileyo kwindawo eyodwa entabeni. ICostas del Cuniputu Natural Reserve, enemibono enomtsalane yeCerro Uritorco, embindini wehlathi lemveli, ukuhlala iintsuku ezimbalwa zodwa ziinduli nomlambo, kodwa kufutshane.
Hlala kwilitye kunye nendlu ye-adobe enamagumbi okulala ama-4 (ama-2 aneebhedi ezimbini kunye ne-2 enebhedi eyodwa), amagumbi okuhlambela ayi-2 aneyacuzi, igumbi lokuhlala elikhulu / lokutyela, ikhitshi, igumbi elingaphantsi komhlaba, iphuli kunye negaraji yezithuthi ezi-2.
Ulwazi oluluncedo malunga neCostas del Cuniputu Natural Reserve: (kubalulekile ukuyifunda)
- Indawo yokungena kule ndawo ikwindlela yegrabile ekwimeko yesiqhelo kwaye uwela iFord phezu komlambo iDolores, ngelori ilungile kwaye ngemoto ixhomekeke kwixesha lonyaka kunye neemvula. olufanayo ekufikeni).
- Ngenxa yokuba iyindawo yokulondoloza indalo ayivumelekanga ukuba ize nezilwanyana zasekhaya, kuba iyakhuphisana kwaye ichaphazela izilwanyana zomthonyama.
- Akukho nkonzo ye-wifi okanye ye-tv, ukuba inomqondiso weselula.
- Indlu itholakala kwi-6 km ukusuka kumbindi weCapilla del Monte kwaye akukho zitolo ezikufutshane, kucetyiswa ukuba uzise ukutya.
- Ubuncinci bokuhlala ubusuku obu-2, ngaphandle kwemida yokungena kunye namaxesha okuphuma kodwa ngokuxhomekeke kubukho bomhla wokuhlala.
- Umthamo omkhulu 6 abantu.
- Iindleko: $ 10,000 ngobusuku.
Imisebenzi yokuzikhethela ngaphakathi kwendawo yogcino. (Ayifakwanga kwixabiso)
-Ukuhamba ngemfundo okukhokelwayo kunye nomgcini wepaki, kunye nokuqatshelwa kwezityalo zendalo.
- Intaka ibukele.
Indlu inamandla elanga kunye namanzi omthombo, ngoko siyakumema ukuba ube noxanduva ngokusetyenziswa kunye nokunyamekela izixhobo.
Yonke inkunkuma oyivelisayo ibuyela nawe, kuba asinayo inkonzo yokuqokelela inkunkuma.